Olee otú na-A High-efe Travel Influencer | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú na-A High-efe Travel Influencer
Ọ bụ nrọ - gaa ezumike ma na-akwụ ụgwọ maka ya. Ọ bụghị nanị na, ma nwere gị flights, ulo, na nri-akwụ ụgwọ maka gị onwe gị kwa.
Tutu Amama, nri? Enweghị ụzọ ọ bụla onye ọ bụla nọ n'ụwa ga-esi akwụghachi azụ na-enweghị onye ọ bụla dị ka gị ka ị hụ ihe nrịba ama nke nnukwu ụgbọ elu A-ndepụta ụwa..
Ewezuga ... E!
Nke ahụ bụ nri, ọ bụ mee ka ị na njem ụwa na onye ọzọ dime - ma ị na-aga nwere iji internet na acuity nke Rain Man ka dọpụta ya.
The kasị mma njem na-ede blọgụ na ha njem na-akwụ ụgwọ maka ha ekele a ngwakọta nke talent, chioma, na nkà - ebe a bụ otú i nwere ike ime otu ihe ahụ.
Mụta otú dee
Ma ị na-a njem vlogger, blogger, ma ọ bụ Twitter, ọ dịghị ihe gbagwojuru irè uzo nke okwu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa maka ndị na-eme njem njem iji mụta ọtụtụ ọrụ ike, ide.
Were a mgbe nile idu na ede ọma oyiri site na-ewere otu awa a ụbọchị idekasi gị echiche. Buru a edetu, dee a onye blog, biputere na Twitter prolifically - ndị a nkà gị azụ n'akpa uwe, ị ga-enwe ike igosipụta onwe gị n'ụzọ dị irè karị na zuru okè a ụda olu na pụrụ inweta gị a na-ewu ewu na-esonụ na web.
Nweta a agbam ume gị na-eso ụzọ
Ònye ka ị ga-atụkwasị obi ọzọ na-elekọta mmadụ media - na Instagram ọrụ onye nanị na-eso ụzọ bụ ha mum na a bot si Russia, ma ọ bụ onye na-ọzọ na-eso ụzọ karịa Kim Kardashian?
Azịza bụ ihe doro anya, na na ọ bụ ihe mere i kwesịrị iji na ego ịkwụsị na-eso ụzọ ka ị na na-amalite gị njem ịghọ onye influencer.
Ịzụ na-eso ụzọ si na saịtị dị ka Greedier Social Media bụ ezigbo ụzọ mubanye a ntọala nke iguzosi ike n'ezi na i nwere ike mgbe ahụ na-ewu na ya ga-eme n'ọdịnihu.
Kpọtụrụ nri ndị mmadụ
The njem ịde blọgụ ụlọ ọrụ bụ asọmpi, na ndị ọzọ ndị mmadụ na-enye ya a laa ọ bụla n'afọ. Ozugbo i nwere a siri ike ntọala nke na-eso ụzọ na ọdịnaya, nanị ụzọ ka onwe gị chọpụtara bụ inwe na aka na njem na enye onye nwere ike ịkwado gị gaa na ezumike.
Iji mee ka ihe bara uru, ị ga-eme ka o doo anya na sponsoring ị ga-enye ndị a ndị mmadụ na-bara uru ikpughe na isi n'ime ha omume igwe mmadụ. Nke a bụ a quid pro ghar ndokwa, ma onye na-ga-ekwe ka ị na-ahụ ụwa.
Ghọta-ege gị ntị
Ndị nkwado ọhụrụ gị agaghị anọ ogologo oge ma ọ bụrụ na ha echeghị na ị nwere ike isonyere ndị na -ege gị ntị - ọ bụ ya mere ịkwesịrị ịma kpọmkwem onye igwe mmadụ gị bụ..
Nke ahụ pụtara na achọta si ege gị ntị si nkezi afọ otu, ha amasị, na-adịghị amasị, ihe saịtị ha na-gaa na, na ihe ha na-eme mgbe ha na-na n'ebe web. Na ozi a na i nwere, ị ga-enwe ike ike ọdịnaya na gị na-eso ụzọ n'anya - na na-na gị haziri n'akụkụ.
Ndị bụ ndị anyị na Atụmatụ! Nwere ike ị na-eche nke ọ bụla ọzọ ụzọ ibu a elu-efe efe njem influencer? Mgbe ahụ, ka anyị mara na ihe n'okpuru!
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo Geneva
Nke ọma tupu ị na-aghọ ihe influencer, mkpa ka ị zụọ njem na osisi ebe, ma malite ịse foto ndị dị egwu na ikuku dị mma, ndị ị na-agụ? Iji Save A Train ka ndị dị ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè, ya mere, ọ gaghị na-eri gị ihe na-ọrụ nke ndụ gị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Obodo ọṅụṅụ na Gbalịa na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-become-a-high-flying-travel-influencer%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe tr aka ru ma ọ bụ na ọ na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#highflyer #influencer #njem #travelinfluencer